Fanampiana ho an'ny fandaharana XMailer v3.0
Mora ny famoronana sy haingana ny fandefasana.
3.0 interface tsara
Ny intuitive interface tsara.
Ny zava-drehetra dia eo ambany fanaraha-maso
Ny mety interface tsara mamela ny fanaraha-maso ny dingana rehetra ny fizarana.
XMailer fitaovana ho an'ny matihanina mailaka-barotra
Fizarana ho an'ny rehetra
Manomboka ny adiresy fotsiny no ilainy ny solosaina sy ny mihazakazaka XMailer
Mandroso mifototra amin'ny ny zavatra niainany teo aloha ny dikan ' ny fampiharana.
Ny tonian-dahatsoratry ny gazety
Haingana sy mora famoronana professional newsletters ny vaovao tonian-dahatsoratra.
Ny tsy manam-paharoa ny teknolojia ny bypass ny spam sivana ho an'ny lehibe tapakila.
Ny fandaharana proizvoit gazety na lahatsoratra sy ny sary tsara tarehy hafatra (endrika .jpg), izay mamela ny mazava sy ny fomba mahomby mba hampita vaovao ho ny mpandray.
Mahery anatiny mameno ny fandaharam-potoana vaovao farany momba ny rindrambaiko mamela anao mba tsy hanitsaka ny SPAM sivana rehetra e-mail rafitra, na dia toy ny MAIL.RU, YANDEX.RU ary GMAIL.COM.
Tsy mamporisika na hampiroboroboana ny fandefasana ny SPAM sy mandray anjara sy miezaka ny manampy amin'ny maha-maro ny raharaham-barotra solontena izay te-hampahafantatra ny mpanjifa izay misoratra anarana fampahafantarana ny e-mail ny gazety.
Noho ny zava-misy fa ny SPAM sivana tsy manome ny fahafahana mba hanafaka ny mitovy e-mail hafatra ho araka izay ilaina, efa lasa izany ary ampiharina ny fandaharana dia tsy manam-paharoa algorithm ny fandefasana taratasy, izay hamela mba misy mandefa hafatra an-jatony maro mailboxes!
Maro ireo solontenan'ny fikambanana efa nankasitraka ny tsotra sy ny fahafaha-miasa ny vokatra, manantena izahay fa ho toy! Ny saina! Rehetra ny andraikitra ho an'ny SPAMMING ny mpampiasa hoatran'ny!
Interface Tsara XMailer 3.0